चिनीमा विचौलियाको विगविगी, उपभोक्ता १२ रुपैयाँ बढि मूल्य तिर्न बाध्य | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
चिनीमा विचौलियाको विगविगी, उपभोक्ता १२ रुपैयाँ बढि मूल्य तिर्न बाध्य
प्रकाशित मिति १८ आश्विन २०७५, बिहीबार २०:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । उपभोग्य सामाग्रीमा विचौलियाको विगविगी यथावत् छ । चिनीमा पनि यस्तै देखिएको छ । एउटा उपभोक्ताले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा सात रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँसम्म प्रतिकिलो बढी रकममा चिनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सरकार र चिनी उद्योगीबीच मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी विक्रि गर्ने सहमति भएको थियो । तर, चिनीको मूल्य आकासिदाँ समेत सरोकारवाला निकाय मौन छ ।
नेपाली चिनी उद्योगीले मुल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सहित चिनी प्रतिकेजी ६४ रुपैयाँ ९७ पैसामा होलसेल पसलमा विक्री गरेका छन् । बजारमा आइपुग्दा ७५ देखि ८० रुपैयाँ जान्छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा सरकार, चिनी उद्योगी र उखु किसान बीच भ्याट सहित ६३ रुपैयाँ प्रति केजीमा विक्री गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले उद्योगीले प्रतिकेजी ७२ रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने चिनी ७ रुपैयाँ घाटामा बेच्न बाध्य रहेको बताउने गरेका छन् ।
चिनी उद्योगीको मनोमानीमा सरकार मौन हुनुले प्रभावमा परेको कतिपयको आरोप छ । सरकार, चिनी उत्पादक संघ र उखु उत्पादक महासंघबीच पनि ६३ रुपैयाँ प्रति केजीमा विक्रि गर्ने सहमति भएको थियो ।
आयात हुने चिनी ६३ रुपैयाँ भन्दा पनि कम पर्ने भएपछि सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगायो । जसका कारण चिनीमा व्यापारीले कालोवजारी सुरु गरेको उखु उत्पादकको आरोप छ । उनीहरुले सरकार उद्योगी तथा व्यापारीको प्रभावमा परेको समेत अरोप लगाउने गरेका छन् ।
चिनीको कृत्रिम अभाव हुँदा समेत सरकारले कुनैपनि अनुगमन गरेको छैन् । उखु उत्पादक महासंघले झैं उपभोक्ताकर्मीहरु पनि सरकार र उद्योगी तथा व्यापारीबीचको मिलेमतो देख्छन् ।
एउटा उपभोक्ताले अहिले प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म रकममा चिनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उखु किसानसंग उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा नै चिनी उद्योगको उत्पादन लागत र विक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । अभाव सृजना गरेर महँगो मूल्यमा चिनी विक्रि हुँदा समेत सरकारको मौनताले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
जनकपुरमा स्वाभिमान भुल्ने यी युवा नेपाली हुन कि भारती ?
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको पहिरन ठ्याक्कै मिल्दो जुल्दो भएपछी सामाजिक संजालमा चर्चाको बिषय…
काठमाडौं । रोल्पाको माडी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष खर्कबहादुर पुनले वडाका सडक निर्माणमा यसपालि आफ्नै डोजर प्रयोग…
काठमाडौं, भदौ १२ । के तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ ? सीप भए पनि काम नपाएर दिनभर कतै बरालिनुभएको छ ?…
काठमाडाैं । मौरीले डसेपछि त्यसको खील हाम्रो शरीरमा गाडिन्छ र हामीलाई अति पीडा हुन्छ । अर्कोतिर, हामीलाई डस्ने मौरी…
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् । दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएका काम…
काठमाडौमा यसरी हुन्छ दिँउसै “सेक्स डिल” रत्नपार्क ‘सदाबहार सेक्स स्पट’6views
कुखुराको भाले बोकेर सुत्केरी भेट्न पुगे वडाध्यक्ष5views